Ngwongwo Siomay, igwe na-enye aka akpaaka - Fuxin
Anyị na-agba mbọ na-eke a nri ígwè enterprise na ama ika. Anyị na-e-agbalịsi ruo ihe mgbaru ọsọ ga-n'ihu mma anyị igwe quality iji merie anyị ahịa afọ ojuju na obi. Anyị na-atụ anya na-ekwenyere ndị ahịa anyị na ndị enyi n'ụlọ na mba ọzọ. Anyị kwenyesiri ike na-ahọrọ anyị bụ ịhọrọ àgwà.
FX-800D akpaka otu akara siomay / siomai / shu ...
Siomai / Siomay / Shumai Ime igwe na-arụ ọrụ akpaka
Akpaaka Triple Line Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Akpaaka abụọ Siomay / Siomai / Shumai Maki…
Automatic Dumpling Ime Machine
Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara na-ejikọta R&D, n'ichepụta, ire na ọrụ mgbe azụchara ahịa.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ngwa ọrụ na-arụ ọrụ buru ibu.
Kemgbe e hiwere ụlọ ọrụ ahụ, erewo ngwaahịa ndị a na mba niile wee bupụ ya na mba ofesi, ndị ahịa nabatara ma nye ha otuto. Anyị kwenyere mgbe niile na "Ogo bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ, na iguzosi ike n'ezi ihe bụ ihe na-enyere mmadụ aka ịmalite mmepe." Ọ bụrụ n’inwere mmasị, jiri obi eziokwu nara ajụjụ gị.
stuffed steamed bun Machine , steamed stuffed bun Ime Machine , Automatic steamed stuffed bun Machine , Pan-eghe steamed stuffed bun Machine , steamed stuffed bun Machine , Ezinaụlọ steamed stuffed bun Machine ,Ngwaahịa niile.